Thingyan Feeling | The World of Pinkgold
Nyein Chan Aung on April 1, 2008 at 3:30 am said:
မြန်မာပြည်က သင်္ကြန်ကို လွမ်းတယ်။
MELODYMAUNG on April 1, 2008 at 5:55 am said:
တက်လို့ပဲ ရေးရေး ၊ ရေးချင်လို့ပဲ ရေးရေး လာဖတ်သွားတယ်။ သိချင်တာလေးတွေ သိရတာ သိုင်းခရုပါ။ ပုံတွေလည်းကြည့်သွားတယ် စစ်။ အကုန်လုံးကို ပြန်တက်ပစ်လိုက်တာလဲ ဂွတ်ထဗျာ Haveanice Thingyan for this year byar!
နှင်းစက်မိုး on April 2, 2008 at 8:29 am said:
အရမ်းခိုက်သွားပြီ.. ဒီ post လေးကို….. 😀
ပုလုကွေး on April 4, 2009 at 1:53 pm said:
လာလည်ပါတယ်။ ပုလုကွေးက ရခိုင်-ဗမာ ကပြားလေးဆိုတော့ ရခိုင်သင်္ကြန်ကို မကဲဘူးဘူးဗျ။ ပျော်စရာကြီးနေမှာပဲ..
Pingback: Thingyan Shades..! « The World of Pinkgold